अद्भुत सुनको लागि जानुहोस् एश गेमिङद्वारा क्यासिनो स्लट मिसिनसँग5रिल्सहरू,3पङ्क्तिहरू, र9भुक्तानी रेखाहरू छन्। यदि तपाईं प्रगतिशील खेलहरू प्ले गर्न मनपर्छ भने, यो प्रगतिशील स्लॉट खेल्न प्रयास गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ तीन वटा खण्डहरू र ठूला पुरस्कारहरू जित्न सक्नुहुन्छ, खेलकूद घटनाहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ!
छिटो चलाउनुहोस्, अधिक जित्नुहोस्!
एक पटक तीन वा बढी जाभालिन-मैन स्क्याटर प्रतीकहरू खेल स्क्रिनमा कुनै पनि ठाउँमा उचाल्ने, जेभेल बोनस सक्रिय हुनेछन्। जेभीलिन-पुरुषको प्रत्येकले आफ्नो जेभीलाई हल्लाउनेछ, तपाईंलाई विभिन्न नगद पुरस्कार ल्याउनेछ। 3, 4, वा5स्प्रिन्टर्सले तपाईंलाई रिलेहरूमा कहीं पनि उड्यो भने तपाइँलाई तीमध्ये एकमा जुवा गर्ने मौका दिन्छ। यदि तपाईंको स्प्रेटर अन्यहरू भन्दा छिटो छ भने, तपाईंले सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार जित्नुभयो।
यस कैसीनो स्लॉटमा अर्को बोनस खेल तपाईंको लागि पर्ख्छ। ट्रयाक बोनस प्रविष्ट गर्न सक्रिय भुक्तानी रेखामा एक प्रकारको3वा थप पदकहरू मिलाउनुहोस्। अब ट्रयाक वरिपरि शानदार पुरस्कार जित्नको लागि चलाउनुहोस्! एक पल्ट तपाईं तीरमा रोक्न तपाईँलाई भित्री लेनहरूमा स्थानान्तरण गरिनेछ जहाँ पुरस्कार धेरै ठूलो छन्!
जानुहोस् तपाईको सुनको पदक!
ट्र्याक खेलको दौडान, तपाईंको जितमा उत्कृष्ट श्रेष्ठको लागि हेर्नुहोस्। यदि तपाईं ट्रयाकमा धनी हुनुहुन्छ भने, तपाइँले यस स्लॉट खेलको प्रगतिशील ख्याति मध्ये एक प्राप्त गर्नुहुनेछ! यस अनलाइन भिडियो स्लॉट खेलमा तीन मध्ये तीन छन्: कांस्य खजाना, चाँदीको खजाना, र सबैभन्दा ठूलो एक - सुनको खजाना।
तपाईं बोनस राउन्ड संग धेरै मुफ्त अनलाइन क्यासिनो स्लॉटमा यस खेलमा जंगली प्रतीक हुनेछ। यसले तपाइँलाई कुनै पनि खेल चिन्हको रूपमा कार्य गर्ने क्षमताको साथ विजेता संयोजन पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ। पदक, जाभिलिन-पुरुष, र स्प्रेटर जंगली द्वारा प्रतिस्थापित गर्न सकिँदैन। जंगली प्रतीक ओलम्पिक मशाल द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ।
सुनको लागि जानुहोस् अपडेट गरिएको: जनवरी 22, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 सुनको लागि जानुहोस्
2.0.0.1 जुरासिक द्वीप
2.0.0.2 वर्षा नृत्य
2.0.0.3 स्पेस रोशनी
2.0.0.5 मिस्रका नायकहरू
2.0.0.6 Serengeti हीरे
2.0.0.7 डराएको साथीहरू